China White Quartz Water Flow Natural Stacked Stone Panel ifektri abakhiqizi | I-DFL
Iphaneli Yamatshe Emvelo Egcwele Amatshe e-White Quartz
Ukwelashwa Kwaphezulu: Ukusika ngomshini
Surface Ukwelashwa:Ukusika ngomshini
Ukugeleza Kwamanzi Okumpunga kweGrey Quartz Iphaneli Yamatshe Yemveloziphelele lemithombo futhi inokunotha kokuthungwa nombala okwengeza umuzwa wobukhazikhazi obungaphelelwa isikhathi kunoma iyiphi indawo yokuhlala yangaphakathi noma yangaphandle.
Ukuqinisekisa ukuqina nokusebenza okuhlukahlukene, imikhiqizo yamatshe yemvelo ingasetshenziselwa ukudala ukubukeka okuhlanganisiwe kwesitayela esihlala njalo.
I-DFLstone Amaphaneli Amatshe unamathele kulezi zici ezilandelayo:
Ufuna Umkhiqizi nomhlinzeki omuhle we-Quartz Natural Stacked Stone? Sinezinketho eziningi ngamanani amahle ukukusiza ukuthi ube nobuciko. Zonke Iphaneli Yamatshe E-Quartz Stone ziqinisekisiwe ngekhwalithi. Siyi-China Origin Factory ye-White Quartz Stacked Stone Panel. Uma unemibuzo, sicela ukhululeke ukuxhumana nathi.
Inzuzo: 1, 14 iminyaka nesipiliyoni ibhizinisi itshe ukuthekelisa .We -DFL inkampani itshe ukwakha ngo-2004 futhi sigxile amandla itshe yemvelo .Inkampani yethu uhlelo unempilo.
Singabantu inkampani ye-ISO 9001: 2015
2, Ibanga eligcwele likhiqiza futhi ungawathenga kithi ndawonye: i-mosaic, i-Flagstone mat, i-cap cap, i-sills, namatshe amatshe njll.
3, inzuzo yeMibhalo
Sinezinzuzo ezingaphezulu kumakhasimende aseNyakatho Melika naseningizimu Melika .Singabasiza ukuthi benze imibhalo ephelele yokungenisa ngokushelela. Okwe-L / C noma eminye imigomo yokukhokha noma imigomo yokuhweba, sinolwazi olugcwele.
Ufuna i-Ice Gray Quartz Stone Panel Manufacturer & supplier? Sinezinketho eziningi ngamanani amahle ukukusiza ukuthi ube nobuciko. Zonke iGrey Stone Panel ziqinisekisiwe ngekhwalithi. Siyi-China Origin Factory yeSitayela Esijwayelekile Samente Lephaneli. Uma unemibuzo, sicela ukhululeke ukuxhumana nathi.
Iphaneli yelitshe le-Ice grey yokuxhumeka
30.5 × 30.5cm Black Yemvelo Stone Pebble KaMose T ...
30.5 × 30.5cm Popular Honed Yemvelo Stone Mose ...
ukuthengisa okushisayo ukuhlobisa kwangaphandle okukhazimulayo ngamatshe wangempela